Ajụjụ - Guangzhou Meiyi Electronic Technology Co. Ltd.
Kacha nta Order ibu
Maka ndị ahịa ọhụrụ, nwere ike itinye usoro nnwale iji nwalee ngwaahịa a’s mma na ahịa na ahịa ha.
Nke a bụ oge mbụ m na-arụ ọrụ igwe egwuregwu, ọ dị mgbagwoju anya ịwụnye?
Mba, Ọ dị mfe ịwụnye, mgbe ị nwetara ngwongwo, ọ nwere ike rụọ ọrụ ozugbo ike gachara.
Ọ bụrụ na voltage na plọg nke ngwaahịa gị ga-abịa na ọkọlọtọ m?
Anyị ga-akwado voltaji na plọg ozi na ndị ahịa n'ọdịnihu ma mepụta igwe dị ka onye ahịa’s arịrịọ.
Ọ bụrụ na gị na ụlọ ọrụ nwere ike omenala-eme ka ngwaahịa na-etinye anyị logo?
Anyị nwere ndị mmebe otu, nwere ike chepụta na omenala-eme ka niile na ngwaahịa gụnyere agba, ebipụta, ụkpụrụ na logo.
You na-enye mgbe emechara ọrụ, ọbụlagodi na mba anyị?
Ee! nke a bụ nkwado dị mkpa. Anyị na-ekwe nkwa nkwanye afọ 1 + nkwado nkwado ndụ niile. (PCB otu afọ akwụkwọ ikike n'efu, ngwa-eyi akụkụ akwụkwọ ikike maka ọnwa atọ); anyị technicians ga-eduzi gị online ndidi, mee a ọkachamara ngwọta na foto na vidiyo maka ahịa, nke na-egosi otú iji wụnye ma ọ bụ idozi na-arụ ọrụ nzọụkwụ site nzọụkwụ. akụkụ mapụtara etinyere anyị ga-eji dochie ya maka ndị ahịa na ụdị ụgwọ ma ọ bụ na-enweghị ụgwọ.
Anyị chọrọ egwuregwu dị iche iche. Nwere ike imere m ya?
Anyị nwere 12 afọ ahụmahụ na egwuregwu ụlọ ọrụ. Obi dị anyị ezigbo ụtọ inyere ndị na-azụ anyị aka ịzụrụ igwe ọ bụla masịrị ha. Ọ dịịrị anyị mfe. Ọrụ bụ n'efu
Ndụ gị ngwaahịa?
Ejiri igwe ohuru ohuru choo igwe nile. Ya mere igwe ndị ahụ niile dị ogologo ndụ karịa ọtụtụ afọ, yana nsogbu enweghị nsogbu. Ndị ahịa nwere ike ịkwụghachi ụgwọ n'oge na-adịghị anya wee nweta uru ruo ọtụtụ afọ.
Olee otú ibubata si china?
Ọ dị mfe, na-enwekarị nhọrọ atọ:
1. anyị na-emeso ọnụahịa EXW, You na-ahụ maka ibugharị ngwaahịa si China na obodo gị. Ga-ahụ onye na-ere ahịa ọdịnala iji nyere gị aka kpochapụ kọstọm iji nweta ngwongwo site na omenala mpaghara gị.
2. Anyị na-emeso ọnụahịa CIF, anyị ga-ebufe ngwongwo ahụ na-aga ọdụ ụgbọ mmiri dị nso na obodo gị, ị ga-ahụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri ka ha nyere gị aka ihichapụ kọstọm iji nweta ngwongwo site na omenala mpaghara.
Nọmalị, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbubata na China ogologo oge, ana m atụ aro ka ị jiri usoro mbụ. Ọ bụrụ na ị maghị onye ọrụ mpaghara gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka kọstọm, enwere m ike ịkwado gị ndị ọrụ tụkwasịrị obi.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji wepụta ngwaahịa site na china gaa mba m?
Dị ka oge dị iche iche ọdụ ụgbọ mmiri dị iche. Na-ekwu ya n'ozuzu’s ihe dị ka otu ọnwa site na mmiri, 3-7 ụbọchị ọrụ site na ikuku.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere ike inyere m aka idozi ụlọ nkwari akụ ọ bụrụ na anyị abịa ileta ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
Companylọ ọrụ anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka idobe ụlọ nkwari akụ ma ọ bụrụ na ha abịarute China ma anyị nwere ike iburu ndị ahịa na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.